Athini amalungelo akho njengomqeshi? | Law & More B.V.
Blog » Athini amalungelo akho njengomqeshi?
Wonke umqeshi unelungelo unamalungelo amabini abalulekileyo: ilungelo lokonwaba lokuphila kunye nelungelo lokuqesha ukhuseleko. Apho sixoxe khona ngelungelo lokuqala lomqeshi ngokunxulumene ne uxanduva lomnini-mhlaba, ilungelo lesibini lomqeshi weza kwibhlog eyahlukileyo malunga ukukhusela irente. Kungenxa yoko le nto omnye umbuzo onomdla uza kuxutyushwa kule bhlog: ngawaphi amanye amalungelo anawo umqeshi? Ilungelo lokonwaba lokuphila kunye nelungelo lokurenta ukhuseleko ayisiyiyo kuphela amalungelo umntu analo kumnini-mhlaba. Umzekelo, umqeshi unelungelo kwinani lamalungelo kwimeko yokudluliselwa kwepropathi enganqamli irente kunye nokuhambisa. Omabini amalungelo axoxwa ngokulandelelana kule bhlog.
Ukuhanjiswa kwepropathi akunqamli irente
Umhlathi 1 weSiqendu 7: 226 seDutch Civil Code, esisebenza kubaqeshi beendawo zokuhlala nezorhwebo, sichaza oku kulandelayo:
"Ukutshintshwa kwepropathi ekunxulumene nayo isivumelwano sokuqeshisa (…) ngumnini-mhlaba ugqithisela amalungelo kunye nezibophelelo zomnini-mhlaba kwisivumelwano sokuqesha kumamkeli. "
Kumqeshi, eli nqaku lithetha okokuqala ukuba ukuhanjiswa kobunini bepropathi eqeshiweyo, umzekelo ngokuthengisa ngumnini-mhlaba uye komnye, akusiphelisi isivumelwano sokurenta. Ukongeza, umqeshi angafaka amabango ngokuchasene nomninimzi oza kungena ezihlangwini zomthetho, ngoku ekubeni lo mntu ungena ezihlangwini zomthetho ethatha amalungelo noxanduva lomnini-ndlu. Kumbuzo wokuba yeyiphi na amabango ngokuchanekileyo umqeshi anayo, kubalulekile ukuseka kuqala ukuba ngawaphi amalungelo kunye noxanduva lomnini-mhlaba odlula kumlandeli wakhe osemthethweni. Ngokwesiqendu 3 seNqaku 7: 226 seKhowudi yoLuntu, la ngamalungelo kunye noxanduva lomnini-mhlaba onxulumene ngqo nokusetyenziswa kwepropathi eqeshiweyo yokuqwalaselwa ukuba ihlawulwe ngumqeshi, okt irente. Oku kuthetha ukuba amabango angenziwa ngumqeshi ngokuchasene nomnini-ndlu oza kungena ezihlangwini zomthetho, ngokomgaqo, ahambelana namalungelo akhe amabini abaluleke kakhulu: ilungelo lokonwaba lokuphila kunye nelungelo lokurenta ukhuseleko.
Rhoqo, nangona kunjalo, umqeshi kunye nomnini-mhlaba nabo benza ezinye izivumelwano kwisivumelwano sokurenta ngokweminye imixholo kwaye bazirekhode ezi kumagatya. Umzekelo oqhelekileyo ligatya malunga nelungelo lomqeshi langaphambi kokufumana ilungelo. Nangona ingenalo ilungelo lokuqesha, oko kuthetha uxanduva lomnini-mhlaba ukuba anikezele: umnini-mhlaba kufuneka kuqala anikezele ngendawo eqeshiweyo ukuze ayithengise kumqeshi ngaphambi kokuba ithengiselwe omnye oza kungena ezihlangwini zomthetho. Ngaba umnini-mhlaba olandelayo uya kubotshelelwa leli gatya ngokubhekisa kumqeshi? Ngenxa yomthetho wetyala, oku akunjalo. Oku kubonelela ukuba ilungelo langaphambi kokukhupha umnini-ndawo alinxibelelananga ngqo nerenti, ukuze igatya elimalunga nelungelo lokuthenga ipropathi eqeshiweyo lingagqithisi kumlandeli osemthethweni womnini-mhlaba. Oku kwahluke kuphela ukuba kuchaphazela ukhetho lokuthenga kumqeshi kunye nemali ekufuneka ihlawulwe ngamaxesha athile kumnini-mhlaba ikwabandakanya into yembuyekezo yokufumana okokugqibela.
Ukongeza, iNqaku 7: 227 yeKhowudi yoLuntu ichaza oku kulandelayo malunga namalungelo omqeshi:
"Umqeshi ugunyazisiwe ukuba anike ipropathi eqeshiweyo isetyenziswa, iphelele okanye iyinxalenye, komnye umntu, ngaphandle kokuba kufuneka acinge ukuba umqeshi uya kuchasa ukusetyenziswa komnye umntu."
Ngokubanzi, kucacile kweli nqaku ukuba umqeshi unelungelo lokufaka yonke okanye inxalenye yempahla eqeshiweyo komnye umntu. Ngokujonga icandelo lesibini leNqaku 7: 227 yeKhowudi yoLuntu, umqeshi akanakho, nangona kunjalo, ukuqhubeka nesicelo ukuba unezizathu zokukrokrela ukuba umnini-mhlaba uyakuchasa oku. Ngamanye amaxesha, isichaso somnini-mhlaba siyabonakala, umzekelo, ukuba ukubekelwa ecaleni into kubandakanyiwe kwisivumelwano sokurenta. Kwimeko apho, ukuzithoba kumqeshi akuvumelekanga. Ukuba umqeshi wenza le nto, kunokubakho isohlwayo sokubuyisa. Esi sohlwayo kufuneka sidityaniswe nesithintelo ekubekweni kwesivumelwano kwisivumelwano sokuqeshisa kwaye sibotshelelwe kwelona xabiso liphezulu. Umzekelo, ukuhanjiswa kwegumbi elivela kwi-Air B&B kunokuthi ngale ndlela kungavunyelwa kuqeshiso, oluhlala lukhona.
Kule meko, inqaku 7: 244 yeKhowudi yoLuntu ikwabalulekile ekugcwaliseni indawo yokuhlala, ethi indawo yokuhlala ayivumelekanga ukuba irente yonke indawo yokuhlala. Oku akusebenzi kwinxalenye yendawo yokuhlala, enjengegumbi. Ngamanye amagama, umqeshi ukhululekile ukuba angenise indawo yokuhlala kwenye. Ngokomgaqo, lo mgcini-mali unelungelo lokuhlala kwipropati eqeshiweyo. Oku kuyasebenza ukuba umqeshi kufuneka ayishiye ngokwakhe ipropathi eqeshiweyo. Emva kwayo yonke loo nto, inqaku lesi-7: 269 leKhowudi yoLuntu yaseDatshi ibonelela ukuba umnini-mhlaba uza kuqhubeka nokufaka umthetho, kwanokuba isivumelwano esiphambili sokurenta siphelile. Nangona kunjalo, le miqathango ilandelayo kufuneka ifezekiswe ukulungiselela eli nqaku:
Indawo yokuhlala ezimeleyo. Ngamanye amagama, indawo yokuhlala kunye nokufikelela kwayo kunye nezixhobo zayo ezifanelekileyo, ezinje ngekhitshi kunye negumbi lokuhlambela. Igumbi kuphela alibonwa njengendawo yokuhlala ezimeleyo.
Imvumelwano yesicelo. Ukuba sisivumelwano phakathi komqeshi kunye ne-subtenant ehlangabezana neemfuno zesivumelwano sokurenta, njengoko kuchaziwe kwi-Article 7: 201 ye-Civil Code.
Isivumelwano sokuqeshisa sinxulumene nokurenta indawo yokuhlala. Ngamanye amagama, esona sivumelwano sikhulu sokuqeshisa phakathi komqeshi kunye nomnini-mhlaba kufuneka sihambelane nerenti kunye nengqeshiso yendawo apho kusebenza khona indawo esemthethweni yokuhlala.
Ukuba le miqathango ingasentla ayithobelwanga, lo mhlali akanalo ilungelo okanye itayitile yokubanga kumnini-mhlaba ilungelo lokuhlala kwipropati eqeshiweyo emva kokuba isivumelwano esiphambili sokuqeshisa phakathi komqeshi nomnini-mhlaba siphelisiwe, ukuze ukukhutshwa ayinakuphepheka kuye. Ukuba umnini-mali uyahlangabezana nemiqathango, kufuneka athathele ingqalelo into yokuba umnini-mhlaba angaqala inkqubo ngokuchasene netyala emva kweenyanga ezintandathu ukuze kupheliswe ukuhanjiswa kunye nokukhutshwa kweleta.
Kanye njengendawo yokuhlala, indawo yentengiso nayo inokubekwa phantsi ngumqeshi. Kodwa ngaba lo mlingisi uhambelana njani nomnini-mhlaba kule meko, ukuba umqeshi ebengagunyaziswanga ukuba enze njalo okanye kufuneka aphume kwipropathi eqeshiweyo? Ngo-2003 kwabakho umahluko ocacileyo: umnini-mhlaba wayengenanto yakwenza nokuthanjiswa kuba umnini-sivumelwano wayenobudlelwane obusemthethweni kuphela nomqeshi. Ngenxa yoko, lo mgcini-mgcini naye wayengenamalungelo kwaye ngenxa yoko ibango kumnini-mhlaba. Ukusukela ngoko, umthetho utshintshile kweli nqanaba kwaye umisela ukuba ukuba isivumelwano esiphambili sokuqeshisa phakathi komqeshi kunye nomnini-mhlaba siyaphela, umqeshi kufuneka akhathalele umdla kunye nendawo yomhlali ngokuthi, umzekelo, ngokujoyina istenanting kwinkqubo kunye umnini-mhlaba. Kodwa ukuba esona sivumelwano siphambili sokuyekisa sisaphelisiwe emva kwenkqubo, amalungelo e-subtenant nawo aya kuphela.
Ngaba ungumqeshi kwaye unayo nayiphi na imibuzo malunga nale bhlog? Emva koko qhagamshelana Law & More. Amagqwetha ethu ziingcali kwicandelo lomthetho wokuqesha kwaye bayavuya ukukunika iingcebiso. Banokukunceda ngokusemthethweni ukuba impikiswano yakho yerenti ikhokelela kwiinkqubo zomthetho.
Post edlulileyo Ukukhusela irente
Post Next Iqabane langaphambili elinelungelo lokugcinwa alifuni kusebenza